Anushka:layma barbardhigi karo Deepika! - iftineducation.com
iftineducation.com – Atariishada caanka ah ee Anushka Sharma ayaa afka furatay iyadoo ka dhawaajisay inaan marnaba la barbar dhigi Karin atariishada kale ee Deepika Padukone oo malhanaan warbaahintu is garab dhigayeen, waxayna codsatay Anushka in la joojiyo warkaas.
Majiraan wax is barbar dhig ah oo noo dhexeeya aniga iyo Deepika, sidoo kale wax isku kayna xiran majiraan, waxaan u kala jilnaa filimada qaabab kala duwan, mana aqbali doono waxyaabaha noocaas ah.
Anushka ayaa aaminsan in iyada iyo Deepika Pdukone shuqul iyo shaqo isku leheyn, qaladna tahay in la barbardhigo eyada, laakiin xanaaqa intaas la eg waxa ka keenay ayaa lala yaabanyahay in jilayaal lays barbar dhigo waa wax dhici jiray had iyo jeere.
DAAWO MUUQAAL :- Soomaalida Zambiya oo dhibaato & bililiqo la isugu daray kadib markii nin uu toogtay shaqaalihiisa